Xmoto: Egwuregwu na-eri ahụ maka GNU / Linux | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Egwuregwu
Ọ bụ ezie na esoghị m ndị na-eji ụbọchị ahụ egwu egwu, enwere oge mgbe m na-etinye nkeji oge iji kpochapụ ya (na kwa elekere) na egwuregwu ụfọdụ anyị nwere ike iwunye na GNU / Linux.
Otu n’ime ha bụ XMoto, egwuregwu dị mfe nke mejupụtara ịchịkwa nwa okorobịa -nke roba m ga - asị- gafere otu Motocross na ọkwa ndị na-aga site na mfe na-agaghị ekwe omume. Egwuregwu ahụ nwere ọtụtụ nhọrọ nhazi na ihe ndekọ anyị nwetara nwere ike bipụta na ịntanetị. Ebumnuche bụ iru ihe mgbaru ọsọ site n'ịchịkọta usoro nke ihe anyị hụrụ n'ụzọ n'oge kachasị dị mkpirikpi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ dịghị ihe ị ga-ede n'ụlọ, mana kwenye m: Engancha !!!
Na onyonyo nke bidoro post a, m na-achọ iru bur site na ịtụgharị azụ iji azụ roba 😀
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Xmoto: Egwuregwu Na-eri Ahụ maka GNU / Linux
Nko? Dị ka m adịghị egosi na m riri ahụ
M Regnum Online arụnyere 😀 ihe Argentine MMORPG na ihe kasị mma o nwere bụ alaeze vs alaeze ọgụ. naanị egwuregwu m nwere ugbu a. Xmoto oge na-aghọ ihe na-agwụ ike.
Enwetụbeghị m nsogbu na egwuregwu vidio (ọ ga-afọ nke nta ka m mechie ndepụta m na "Prince" si ms-dos, "Mario" 1 na 3, "Zelda ocarina of time" si Snes, "Crash", "Alice-McGee- "," Angrybirds "," Secret Maryo Chronicles "," Hedgewars "na ma eleghị anya ụfọdụ m na-atụ uche), agbanyeghị, Xmoto dị nso ịbanye na ndepụta ahụ. Echetara m na m mechara ihe ndekọ ahụ n'otu n'ime ndapụta nke were naanị ụbọchị 3, hehe. Mana imirikiti ndị m nwara ịgafe, enweghị m ike ịme ya. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ndapụta (a na-agbakwunyekwu oge ọ bụla) na ọ nweghị ụzọ ọbụlagodi ịnwa ịgafe ha, heh.
Achọburu m ịwụnye ya 🙂
Hahahaha .. E nwere ụfọdụ ndapụta ebe ị ga-etinye mgbagha, mana na ndị ọzọ na-etinyeghị ya n'ọrụ ị nwere ike ịgafe ha .. Kedụ ka ha ga-esi mee ya?
E-e, enwere ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche, mana ndị na-agaghị ekwe omume:
a) ndị mkpịsị aka "taur" na piano keyboard (ja) dị mkpa iji debe igwe kwụ otu ebe, na-enweghị mgbanwe ọ bụla, na 27.0013º (ja) na ala maka ọtụtụ, ọtụtụ, ọtụtụ sekọnd;
b) Ndị o yiri ka ha na-ebu ụzọ dee ndekọ ọgba aghara ọgba aghara na nke iwu na-akwadoghị (na otu ihe kpatara ya, enweghị ike ikwughachi ya), ma ha tinyezie njedebe na ihe mgbochi nke ogbo ahụ, ha.
Hụ ma ị ga-esi gafere
Gaa labeelu shit
Egwuregwu a ochie, Egwuru m ya ọtụtụ afọ gara aga na windo….
Gbanwee Amarok Splash maka ọzọ
Ubuntu ahụhụ # 1